Travel & fizahan-tany - Easy Multi Display - Rindrambaiko Digital Signage
Ivotoeram-baovao, ivom-pizahan-tany, hotely, ivon-toerana sy maro hafa
MBOLA AZO FOTOTRAO
Na mitantana hotely ianao, fizahan-tany afovoany na mikarakara hetsika lehibe miaraka amin'ny olona an'arivony ianao, Easy Multi Display dia manampy anao handray ny vahiny amin'ny fomba mora. Na te-hampiseho fiarahabana miarahaba anao ianao, na fampahalalana momba ny hetsika ho an'ny vahiny, dia azonao atao amin'ny EMD.
Aorian'ny fandraisana anao ny vahiny, azonao atao ny mizara fampahalalana manan-danja momba ny hetsika iray, toy ny fandaharam-potoana, torolàlana ary serivisy hafa atolotra.
Talohan'ny nanoratanay ny menus amin'ny sisin-tany. Asa mafy izany ary nisy fiantraikany kely kokoa. Amin'ny Easy Easy Display, manintona ny sain'ny mpanjifanay avy hatrany isika.
Mpitantana labiera, Bruxelles
Ao amin'ny UNICEF dia mampiasa Easy Multi Display ao anaty efitraninay izahay mba hampisehoana ireo hetsika ataontsika manampy ny ankizy eran'izao tontolo izao. Izany dia
ny fahafahantsika maneho ny fanoloran-tenantsika amin'ny fomba mavitrika, amin'ny fampiasana ny fihetseham-po.
Araka ny lazain'ny anarana dia mora ampiasaina ny EMD. Tsy mahalala na inona na inona momba ny solosaina aho. Miaraka amin'ny EMD dia manana vahaolana ara-pifandraisana nomerika misy calibrated ho an'ny birao nify.